KDE plasma 5 foornada (sidoo kale mozpeg) | Laga soo bilaabo Linux
6 sano kahor waxaa jiray jahwareer aad u weyn markii KDE 4.0 lagu dhawaaqay isla markaana ka-wareejinta KDE 3.5 waxay ahayd mid liidata. Laakiin maanta iyadoo la siidaayo KDE Plasma 5, waxay xaqiijinayaan in wax xun aysan dhici doonin.
Bilowga, mawduuca dabaysha caadiga ah. Nadiifi, mid isku mid ah, fidsan oo aad u sarreeya. Isticmaalka OpenGL si loo wanaajiyo waxqabadka garaafyada, waxay isu keeneen isbeddelada ugu waaweyn ee u muuqda isticmaalaha. Kadibna waxaa jira duuliyayaal casri ah, isu-imaatinka qolofka, taageerada ugu wanaagsan ee bandhigyada cufnaanta badan iyo daaqadaha ogeysiiska oo yar, iwm. Taasna waxaan ku darnaa qaabdhismeedka KDE 5, oo leh 80 qaybood oo loo qaybiyay 3 qaybood iyadoo lagu saleynayo ku tiirsanaantooda-waqtiga iyo 3 heerar oo ku saleysan isku-xirnaantooda-isku-xirnaanta waqtiga. Weli waxyaabo badan ayaa ka dhiman sida taageerada buuxda ee Wayland ama u guuritaanka qt5 oo dhameystiran.
Dad walwalsan ayaa isku dayi kara leh Kubuntu tan ku saleysan ISOama soo dejinta iyo soo ururinta ilaha.
War kale, mozpeg 2.0 ayaa soo baxa
Mozilla waxay sii deyneysaa nooca 2.0 ee mozpeg, Joodhadh u gaar ah oo loo yaqaan 'JPEG encoder', kaas oo yareeya cabirka sawirrada 5%, iyadoo sawirrada qaarkood ay muujinayaan hoos u dhac weyn. Facebook waxay sheeganeysaa inay ku faraxsan tahay mozpeg ayna qorsheyneyso inay u adeegsato tijaabooyinkooda, marka lagu daro inay ugu deeqday $ 60.000 Mozilla.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » KDE plasma 5 oo ka baxsan foornada (sidoo kale mozpeg)
Shaki la'aan laba war oo aad u wanaagsan. Marka laga hadlayo KDE, waxaan iri isla wixii aan ku iri Twitter-ka: Haddii aan iyaga ahaan lahaa, waxaan sugi lahaa muddo dheer si aan u sii daayo noocaan, oo aan 100% la safeynin. Dhanka kale waxaan kusii dhegi doonaa KDE-da hore, 4.13 ama 4.14 markay soo baxdo 😀
Hadda waa shaqooyinka qaybinta maaha inay sii daayaan KDE cusub sidii ay ku sii daayeen 4.0, markii ay ahayd mid aan la adeegsan karin oo daaqadda "shilalka ilaaliyaha" ayaa soo baxaya shantii daqiiqaba. Horumariyaasha KDE waxay sheegeen inay 4 taageeri doonaan laba sano oo dheeri ah oo ah LTS ... laakiin dadku aad ayey u sabraan oo waxkastoo dhaca ...
Ku jawaab Txarrán
Wow waxaan arkay fiidiyowga wax walboo ay soo kordhiyeenna waa heer sare waan jeclaa, wax badan oo ka xirfad badan sidii ay horeyba u ahayd, marka lagu daro bixinta muuqaal casri ah oo desktop-ka ah, adeegsiga aadka u wanaagsan ee tikniyoolajiyadda ay leeyihiin In kastoo, aniga waxay ila tahay in tallaabada laga bilaabo k3 ilaa k4 ay aad uga weyneyd tan waxaani yahay, tani waxay umuuqataa horumar aad u wanaagsan oo ku dhaca plasma k
Waxay umuuqataa gabi ahaanba wax layaableh ..
Wow 6 sano dhakhso? Waxaan dareemayaa gabow hahaha, laakiin weyn KDE 4.5 waxay umuuqataa mid sifiican looqabtay 😀
Mahadsanid ragga jooga KDE. Kooxda sameynta KDE waxay qabteen shaqo qurux badan, gaar ahaan bar-tilmaameedka iyo fiiri & dareemo ka socota bar-hawleedka.
Dhankeyga, waxaan sugi doonaa ilaa nooca 5 uu soo baxayo, horeyba 100% waa la tijaabiyay waana la hagaajiyay, maxaa yeelay KDE 4.8 ayaa iga furay QT oo aanan awoodin inaan si sax ah u qaabeeyo (markaan u guurayo Arch, waxaan kuu sheegayaa sida ay ku dhacday, maxaa yeelay xilligan waxaan joogaa Debian Jessie aniga oo la socda XFCE).
Waxaan rajeynayaa inaad duubis intaa ka badan haysato
waa wax aad u wanaagsan
Runtu waxay tahay in aniga aragtidayda Kde uu leeyahay dagaalka guuldarada. Waxay ahayd inay ka tanaasulaan fikirka Plasma oo ay wax kale kasoo bilaabaan meel hoose. Plasma waa guuldarro iyo fikrad gebi ahaanba aan waxtar lahayn. Xaqiiqdii, Kde4, oo horumar ku jirtay muddo lix sano ah, waxay ku sii jirtaa cayayaanka aan la cafin karin, waxaanan ka hadleynaa lix sano hadda. Tusaale ahaan, Kde 4.13.1:
1. Waxaan isticmaalaa laba kormeerayaal, waa hagaag, Kde waxay jeceshahay markaan haysto kormeeraha labaad la xiro si aan u dhigo shaashadda soo galitaanka ee ay kuxirantahay, taas oo aan ku qasbinayo inaan ku bilaabo. Waxaa intaa dheer, waxay kaloo caado u leedahay inay daaqadaha ka furto kormeeraha labaad, marka waa inaan mar kale shidaa oo aan u wareejiyaa daaqadda kormeeraha guud.
2. Markii aan nuqul galiyo feylalka 'pendrive', wuu ku dhacaa waana inaan ku duceystaa inuusan qalad sameyn. Si tan loo xalliyo waa inaan wax ka beddelaa khadadka kernel si ay si sax ah ugu nuquliso faylasha.
3. Sidoo kale waxay caado fiican ii leedahay inay ii sheegto in qashinka dib loo warshadeeyo uu buuxsamo marka aysan jirin faylal, waana lagama maarmaan in la sameeyo jaangooyooyin kale si dhibaatada loo xaliyo.
4. Jeexitaanka barakaysan ee leh milkiilayaasha nvidia ma jirto cid ka qaadi doonta. Tan darteed waa inaan ku dhejiyaa qoraalka galka profile.d
Iyo cilado kale oo badan oo aanan sii xasuusan…. Su'aashuna, haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba, waxay tahay in Gnome 3 wax walba ay ka shaqeeyaan sanduuqa, maahan inaan wax ka beddelo, wax walba way shaqeeyaan. Waan ka xumahay laakiin waa waayo-aragnimadayda. Waxaan ka baqayaa Kde5, haddii kde4 oo sannado badan ay aad u xun tahay, ma doonayo inaan ka fekero waxa laga heli karo kde5.
Waxaan ku celinayaa markale, waxay ahayd inay kala furfuraan fikirka Plasma, waa guuldaro waxayna ka dhigaysaa qof kasta oo adeegsada Gnu / Linux inuu cararo.
Oo intaas oo dhanna ma aan troll, waa uun aan waayo-aragnimo
Ku jawaab sputnik
Runtu waxay tahay in aniga aragtidayda Kde uu leeyahay dagaalka guuldarada. Waxay ahayd inay ka tanaasulaan fikirka Plasma oo ay wax kale kasoo bilaabaan meel hoose. Plasma waa guuldarro iyo fikrad gebi ahaanba aan waxtar lahayn. Xaqiiqdii, Kde4, oo horumar ku jirtay muddo lix sano ah, waxay ku sii jirtaa cayayaanka aan la cafin karin, waxaanan ka hadleynaa lix sano hadda.
Hagaag, waxaan u galaynaa qaybo si aan u aragno aragtidaada, laakiin kahor intaanan ku siinin tayda waxaan kuu sheegi doonaa waxyaabaha soo socda: MA ahan in qof kastaa leeyahay khibrad isku mid ah isla sheyga. Anigana waxbaan kugula duwanahay, inkasta oo KDE 4 badan (oo aan kujiro naftayda) ma aaminin Plasma, fikradeeda iyo fulinteeduba waxay ahayd wax aad u horumarsan waqtigaas iyo maanta, inbadan oo naga mid ah wali ma helin kala bar faa'iidadeeda.
Tusaale ahaan, Kde 4.13.1:
Marnaba iguma dhicin aniga, dhab ahaantii, KDE waa suurtagal in ay tahay desktop-ka oo bixiya fursado iyo faa'iidooyin badan markii la isticmaalayo laba kormeere
Halkaas waan kugu raacsanahay qayb ahaan, laakiin khibradeyda maahan dhibaato KDE, waa dhibaato guud maxaa yeelay kiiskeyga kama dhacdo dhammaan fiilooyinka xusuusta USB. Xaqiiqdii, adigu waxaad u sheegtay naftaada: Waa inaan wax ka beddelaa khadadka kernel, iyo ma ahan dhowr khadadka KDE. By the way, maxaad ku sameyneysaa xarkaha si aad u hagaajiso?
Aniga iguma dhacdo
Kuuma sheegi karo maxaa yeelay waligeyba waxaan haystay sawirada Intel, laakiin kumbuyuutarka kale (meesha aan ku haysto labada kormeerayaal) oo leh kaarka ATI wuxuu u shaqeeyaa dhibaato la'aan.
Haddii aad ku fiicnaato GNOME sida ku xusan khibradaada waan kugu hambalyeynayaa, laakiin kuma raacsani in Plasma uu yahay mid fashilmay, maxaa yeelay sidaan ku sheegay bilowgii, waxaan hubaa inaadan ka faa iideysan farsamadaas. Guul darradu waxay ahayd isku day ah in la dhigo isdhexgal looxyada (Windows 8 iyo GNOME) oo aan wax soo saar laheyn madaxa isticmaaleyaasha loona sheego isticmaaleha inay taasi tahay sidaasna ay ku sii jirto, maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin inuu kan ugu fiican yahay ( Qaabka OS X).
Plasma waxaa lagu waafajin karaa baahida isticmaale kasta: GNOME NO!. KDE waa tan ugu habeysan ee loo yaqaan 'Desktop Environment' halkaas: GNOME MAYA! KDE waxay leedahay codsiyo iyo qalab aad u awood badan oo ikhtiyaarro ka buuxo: GNOME MAYA! Laakiin haye, waan ku celinayaa, hadaad sifiican wax uga qabatay hambalyada GNOME, laakiin uma malaynayo inay ahayd dawada sidoo kale.
Waxaan ka helay xalka wareejinta faylka halkan: http://www.lasombradelhelicoptero.com/2014/04/solucionando-problemas-en-chakra.html. (Kaliya waxaad u sheegtaa in Gnome uu si sax ah u nuqul faylasha isagoon waxba taaban).
Muhiimadu waxay tahay anigu ka faa iideysan maayo teknolojiyada 'Plasma' maxaa yeelay wax badan ayaan hayaa, uma baahni. Waxaan jeclaan lahaa in aan iraahdo Kde waa deegaan aad u wanaagsan oo qof walba isticmaali karo, laakiin maahan. Deegaanku waa inuu fududeeyaa adeegsiga barnaamijyada, oo uusan u hor istaagin sida kde4 ay ugu sameyso "teknolojiyad" aad u badan sidaad u leedahay.
Waxaan ku celinayaa inay tahay fikrad shaqsiyeed, laakiin waan baabiin lahaa plasma ..
Dhanka kale waxaan ku faraxsanahay in khibradaada Kde ay tahay mid lagu qanco, taasi wey i farxad gelineysaa maxaa yeelay waxa muhiimka ah waa in Gnu / linux horay u socdo, Kde, Gnome ama waxkastoo jira.
Maxay dhibcaha 2 iyo 4 ka leeyihiin KDE? Waxay noqon doontaa dhibaato kernel iyo Nvidia. Barta 1aad ayaa u badan inay adiga khaladkaaga leedahay qalad wax laga beddelay, laakiin ma garanayo maxaa yeelay ma isticmaalo laba kormeere.
Plasma sidoo kale ilaahyadayda ma ahan oo cayayaanka duugga ah qaarkood lama cafin karo, laakiin maahan inay aad u xasaasi tahay. Maxaa la qaban karaa, rajo ahaan mustaqbalka fog, waa in la isticmaalo guddiga LXQT iyo wax kasta oo kale KDE ama loo isticmaalo wax ka saaxiibtinimo yar sida BE :: Shell haddii ay u guuraan qt5, hadda aragti ahaan wax waliba waa ka casriyeysan yihiin waadna guuleysatay 'maahan inaad soo dejiso 500 megabyte oo ku xirnaanta si loo rakibo Kate iyo gwenview oo keliya.
Waxay ku xiran tahay Gnome 3 aniga igama dhacdo aniga, sida ugu fudud ee taas. Markaa laga bilaabo kernel iyo nvidia waxba. Gnome 3 oo ka baxsan sanduuqa ayaa si fiican u shaqeeya, mana laha "tiknoolajiyad" aad u badan.
Waxay uraysay sida gnomer ... oo ii sheeg, maxay dareemeysaa inaysan awoodin inay badasho badhamada bidix? Maxay dareemeysaa inay ku faanto CSDs (gtkheaderbar) oo kaliya 4-5 codsi ayaa adeegsada .. . xitaa ma ahan wax yar sida terminalka ... Miyaad dareentaa inaad maalinba maalinta ka dambeysa kula dagaallameyso "inutilus"? codsi badan oo cimilo fiican khariidad badan ... laakiin xitaa kamahadalno raaxada (in kasta oo qodobkani uu kafiican yahay markaan akhriyo faallooyin sifiican u qeexaya dareenka qaar badan «markasta oo aan isticmaalo Gnome Shell waxaan haystaa jiirka inuu qaato ", dabcan macquul maahan .. qaarbaa oran doona laakiin" hotkeys "blah blah blah ..." hotkey barakeysan "ayaa heysta ilaa LXDE ... wax gaar ah malahan ... waxaa leh kuwa ma jeceshahay inaad riixdo 22 fure si aad u furto Firefox oo leh lambarka sumadda 4 ee liiska…)?
Marka laga hadlayo qodobada aad sheegaysid ... aniga waxay ila tahay inay jiraan qalad badan oo kaagajira dhawr qodob (mid xusid midna ... kan daaqada ka furaya kormeeraha oo laga baxo ... ilaaheey .. hadaad baarteen) wax yar oo KDE ah oo aan iska dhigin inay tahay wax kale oo gnome 3 ah .. waad ku kala duwanaan kartaa garaaf ahaan dookhyada KDE adigoon sameyn wax yaab leh .. waxaa loogu yeeraa "furitaan caqli leh" ama wax la mid ah, oo waxay qabato waa daaqadaha oo keliya meelaha shaashadda ah ee aysan daboolin daaqadaha kale ee furan but laakiin ... maadaama badankood ay u heellan yihiin inay tuuraan shito iyaga oo aan isku dayin ...) ... gaar ahaan maxaa yeelay waxaan ogahay Gnomers in sida saxda ah waxa ay ku dhaleeceynayaan Gnome uu yahay wada noolaanshaha yar ee uu la leeyahay «labada kormeerayaal»
60 kun? Waa maxay jiirka xun!
Nasiib xumo intee le'eg ayuu Debian ku xushay taariikhda qabow ee Jessie, waxay i siineysaa inay ka dhamaaneyso KDE5 iyo LXQt (ama noocyo aan aad loo nadiifin). Waxay noqon laheyd oo kaliya in inta udhaxeysa iyo Nofembar Xfce iyo Mate ay aadaan GTK3 iyaga oo wata noocyo cusub, 🙁.
Dhab ahaantii waxaan doorbidaa Debian 8 oo lagu sii daayay KDE iyo LXDE oo deggan, kuwa cusub waxaan marwalba yeelan doonnaa Tijaabinta iyo Siidhka.
x11tete11x anigu ma ihi humaag, kaliya waxaan sheegaa waxa aniga ii shaqeeya iyo wixii aan anfacin. Marka laga hadlayo labada kormeere waxaan isku dayay waxaad leedahay iyo kun kale oo wax ah mana jirin waddo. Haddii gnomers-ka ay ka cawdaan kormeerayaasha laba-geesoodka ah waxba igama gelin, aniga ayay ii shaqeysaa, muddo.
Marka laga hadlayo waxaad leedahay, haddii aan dareemo tan ama tan kale, waxaan dareemayaa wanaag aad iyo aad ugu raaxeysanaya Gnome 3. Runta waxa ay tahay, weligay ma aanan isticmaalin jawi deggan oo sidan oo kale ah wax walbana way shaqeeyaan, iyada oo aan cayayaanka nacaybka lahayn. Runtu waxay tahay in Gnome 3 ay cajiib tahay. Waan jeclahay
Markaa dib ayaan kuu soo celinayaa, haddii sidaad adigu u sheegto aysan shaqeynayn, maxaad ugu timid inaad shit ku tuurtid boostada KDE? ... Eebbe ayaa og ... midkastaba waalihiisa ..
Uma aan iman inaan tuuro shit, waxaan u imid inaan ra'yigayga dhiibto markii aan arkay bixitaanka Kde5. Fikradayda (iyo tan kuwa isticmaala Kde badan) ayaa ah in Plasma ay tagto. Ka taxaddar, waxaan leeyahay Plasma ee ma ahan Kde iyo barnaamijyadeeda oo dhan kuwa ugu fiican ee ku jira Gnu / Linux.
Kaliya waa iga niyad jabaysaa in Kde5 ay wali isku mid tahay Kde4, ceeb ayay ku sii wataan fikirka Plasma; sidaa darteed waligood isma qaadi doonaan.
Dhaleeceyntaani waxay aadeysaa wadada loo wajihi karo horumarinta miisaska… .. Is waafajinta weligeed ah ee dib u soo nooleynta giraangiraha sanadkiiba hal mar, miyaadan daalin, sax? Shayga waa fududahay, wax fikrad ah kama laha waxa ay rabaan inay gaaraan, kun isbedel waligoodna ma dhamaan doonaan, niman yahow, wax iska daa oo kaliya cayayaanka iska saar, waxaan la yaabanahay, ma waxaad u maleyneysaa in dadka isticmaala dhamaadka ay dib u la qabsan doonaan weligood? haddii ay adag tahay inay jiraan dad u dulqaata isbeddellada astaamaha!
Kani waa baddii qanacsanaanta, waxaa soo baxday in markay wax si fiican u socdaan, markaa waxtar dambe ma leh maxaa yeelay waa duug.
Dunida waalan ee aan ku habboonayn.
Si sax ah plasma 5 waxay kudhowaad lamid tahay 4 markii la isticmaalayo, korkeedana waa laga fiicnaaday, waxaad heshay war qaldan.
Julian Ortigosa dijo
Waxaan jeclaan lahaa in la ii sheego horumarka
Ku jawaab julian ortigosa
Ogsijiin aad nuugto xD
Laakiin maanta markii la sii daayay KDE Plasma 5, waxay dhahaan wax xun ma dhici doonaan.
wax xun oo dhacayaa ma jiraan, deegaanka kaliya ayaa fool xun, kaliya waa 🙁
maryan henry korea v dijo
barnaamijka cajiibka ah ee ubuntu 14.04 waxaan jeclahay inaan garaacayo indhoolayaal laakiin waxaan baran doonaa ku dhowaad 80 sano
Jawaab mario henry korea v
KDE 5 WAA M M !!!!
KDE Connect: Tijaabinta Samsung Galaxy Discover
HostAdmin: Wax ka beddel faylkaaga / iwm / faylashaada Firefox